"Jesosy... Mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy." 1 Tesaloniana 1:10
"Fa amin'ny anarany no hahazoan'izay rehetra mino Azy famelan-keloka." Asan'ny Apostoly 10:43
Tamin'ny vaninandro nanorenana ireo katedraly tany Frantsa, dia naraikitra teo amin'ny fototry ny rindrina iray ny vy boribory mafy, nantsoina hoe «vy boriborin'ny famonjena». Mihazona azy mafy fotsiny ny mpanao ratsy iray, dia voaro fotoana fohy amin'ny fanenjehana azy. Nisy koa «faritry ny famonjena», nosoritana manodidina ireny katedraly ireny, izay toeram-pialofana tsy azo isamborana an'iza na iza.
Izany zavatra izany dia natao mba hanalefahana ny hasiahan'ny fitsarana tamin'izany fotoana izany. Angamba nalain-tahaka tamin'ireo "tanàna fandosirana" lazain'ny Baiboly, izay natao handraisana ireo namono olona tsy nahy (Nomery 35:11). Ary ireo nahafaty olona dia afaka nijanona tao, raha voaporofo fa tsy ninia namono olona izy.
Ankehitriny koa isika rehetra dia mbola mila "tanàna fandosirana", mba tsy ho tratran'ny fitsaran'Andriamanitra, tsy noho ny fahadisoana tsy nahy vitantsika ihany, fa indrindra koa noho ireo tsy fankatoavantsika an'Andriamanitra.
Izaho izay manoratra izao teny izao dia tsy maintsy niaiky, indray andro, fa meloka sy mendrika ny fanamelohan'Andriamanitra. Ny fiainako lasa dia faniratsirana tsy tapaka an'Andriamanitra, ary ny fanapahan-kevitro, matetika, dia natosiky ny fitiavan-tena na ny avonavona. Fa inona no nataoko? Nihazona ny «vy boriborin'ny famonjena» aho, izany hoe ny tanan'Andriamanitra izay natsotrany amin'ny olombelona hatry ny ela. Ny fitokisako dia napetrako tamin'i Jesosy Kristy Zanany, Izay nanaisotra ny fahotako, niniako na tsy niniako natao.
Ary ianao, inona no hataonao anio?